14/05/2018 - Page 3 sur 3 -
Fanondrahana odimoka isan-tokantrano : Maharo mandritra ny 7 volana
14/05/2018 admintriatra 0
Ny famendrahana fanafody mamono moka isan-tokantrano no antsoina hoe “Campagne d’ Aspersion Intra Domiciliaire” na “CAID”. Anisan’ny paikady iray ampiasain’ny minisiteran’ny Fahasalamam-bahoaka hiadiana amin’ny tazomoka. Ny tokantrano rehetra eto afovoan-tanin’i Madagasikara no manao azy io …Tohiny
Maurice Tsihiavonana : Nisy nanafika tao an-tranony
Naverina matetika teto amin’ity gazety ity ny fanontaniana manao hoe: “inona no famaritan’ny sasany ny antsoina hoe demôkrasia sy ny fahalalahana maneho hevitra?”. Rehefa dinihina sy fakafakaina lalina tokoa mantsy ny zava-misy tato ho ato …Tohiny
Tsy mitombina ny filazan’ireo depiote miisa 73 fa tsy manaiky ny fanelanelanana ataon’ny vondrona iraisam-prenena izy ireo amin’izao hetsika ataony izao. Fantatra mantsy fa mandray anjara mavitrika amin’izany fanelanelanana izany izy ireo. Norbert Lala Ratsirahonana …Tohiny
“Fampandrosoana ny firenena izao no mahamaika”. Io no valintenin’ny Filoham-pirenena, Hery Rajaonarimampiaina, rehefa nanontanian’ny mpanao gazety mikasika ny fanovana ny mpikambana sy ny governemanta mihitsy. “Tsy tokony hino ny tsaho aely etsy sy eroa ary ...Tohiny
Marc Ravalomanana : Omaly tsy miova!